Wararkii ugu dambeeyay saldhig Shabaab oo Duqeyn lala eegtay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Wararkii ugu dambeeyay saldhig Shabaab oo Duqeyn lala eegtay
July 11, 2018 at 21:11 Wararkii ugu dambeeyay saldhig Shabaab oo Duqeyn lala eegtay2018-07-11T21:11:18+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Duqeyn Mintidiin ka tirsan Al Shabaab lagula eegtay Tuulada Xasan Kuusow oo u dhaxeysa Degaanada Jawaari iyo Rooxoole oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe.
Duqeynatan oo dhacday xalay abaare 03:00 habeenimo ayaa waxaa lala beegsaday saldhig ururka Al Shabaab ay ku tababaraan caruurta yaryar ee ay waalidoontooda xoogga uga soo kaxeysteen.
Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen in xalay ay marqura maqleen ilaa 9 Gantaal oo gudaha ugu dhacay xerada Shabaab, halkaasina uu ka dhashay khasaare kala duwan.
Saraakiil ammaanka qaabilsan oo xoogga dalka ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen Duqeyntan in lagu dilay ilaa Sideed dagaalyahan oo ka tirsan Shabaab, sidoo kalena laga gubay laba gaadiid oo midi uu yahay kuwa dagaalka.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya goobta ay Duqeynta ka dhacday ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa hada Diyaaradaha Duqeynta geystay ay hawlo kormeer ah ka wadaan degaanka ay Duqeynta ka geysteen, si ay ula socdaan khasaaraha ka dhashay Duaeyntan.
Ilaa hadda si dhab ah looma oga wadanka laga leeyahay Diyaaradaha Duqeyntan fuliyay, Mareykanka war uu soo saaray wuxuu ku sheegay Duqeyn uu Somaliya ka fuliyo inay ugu dambeysay bishii June ee sanadkan, hadana uusan lug ku laheyn Duqeyntan.
Ururka Al Shabaab oo dhankooda Duqeyntan ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inaanay jirin khasaare ka dhashay Duqeyntan oo soo gaaray dhankooda ama dad shacab ah, waxaynta tilmaameen in Gantaalada aybku dhaceen meel cidlo ah.
« Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo qabatay Madal ku saabsan Heshiisyadii Baydhabo
Koox dhallinyaro ah oo tabarucayaal ah oo Caruur ku tabaalaysan caasimadda Soomaaliya siinaya waxbarasho bilaash ah. »